Uluhlu lwe-FCD63 Ubungqina bokudubula busebenza ngokufanelekileyo ukugcina amandla okugcina izibane ze-LED (i-smart dimming)
1. Isetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezinobungozi ezifana nokuhlola i-oyile, ukucocwa kwe-oyile, ishishini lemichiza, imboni yezomkhosi, amaqonga e-oyile e-offshore, iinqwelo ze-oyile kunye nezinye iindawo zokukhanyisa ngokubanzi kunye nokukhanyisa ukusebenza;
2. Isebenza ekukhanyiseni iiprojekthi zokulungiswa kombane kunye neendawo apho ukugcinwa kunye nokutshintshwa kunzima;
3. Isebenza kuZowuni 1 kunye neZowuni 2 yemekobume yerhasi eqhumayo;
4. Isebenza kwi-IIA, IIB, IIC yendawo yerhasi eqhumayo;
5. Isebenza kwimimandla ye-21 kunye ne-22 yendawo yothuli oluvuthayo;
6. Isebenza kwiindawo ezineemfuno zokukhusela eziphezulu kunye nokufuma;
1. Iqokobhe le-aluminiyam i-alloy die-casting, umphezulu we-electrostatically sprayed, kwaye inkangeleko intle.
2. Ngomsebenzi wokukhanya okrelekrele, inokuqonda ukuba umzimba womntu uhamba ngokokukhanya okusetiweyo emva kokuba umzimba womntu uhambe ngaphakathi kuluhlu olujongwe.
3. Ubume obucwengileyo obungangenwanga ngumlilo obunemingxuma emithathu, obulungele irhasi eqhumayo kunye nemekobume yothuli olunokutsha, egqwesileyo ekusebenzeni kobungqina bokudubula kunye nokusebenza kwefotometric.
4. Intsimbi engenasistainless izibophelelo eziveziweyo ezinokumelana ne-corrosion ephezulu.
5. Ubushushu beglasi isiciko esicacileyo.Uyilo lwe-atomized anti-glare, ekwaziyo ukumelana nefuthe lamandla aphezulu, ukudibanisa ubushushu, ukuhanjiswa kokukhanya ukuya kuthi ga kwi-90%.
6. Itekhnoloji yamandla aqhubela phambili aqhubela phambili, igalelo lombane obanzi, ngokuqhubekayo ngoku, ukukhuselwa kwesekethe evulekileyo, ukukhuselwa kwesiphaluka esifutshane, ukukhuselwa kokunyuka, njl.
7. Inani leemodyuli ze-LED ze-brand zamazwe ngamazwe, inkqubo ye-secondary optical distribution system eyilwe yi-software ye-optical professional, ukukhanya kucacile kwaye kuthambile, umphumo wokukhanya ngu-≥120lm / w, ukunikezelwa kombala kuphezulu, ubomi bude, kunye nokusingqongileyo. iluhlaza.
8. Umbhobho womoya ovulekileyo we-heat-dissipating ugqithisa ngokufanelekileyo umthombo wokukhanya kunye nobushushu bokubonelela ngamandla ukuze kuqinisekiswe ubomi benkonzo yesibane.
9. Ubuchwephesha bokutywinwa obuphezulu buqinisekisa ukusebenza kwexesha elide kwiindawo ezikhuselekileyo, ezinomswakama.
10. Indlela yokulungelelanisa yesibiyeli eyilwe ngokukodwa elungelelanisa i-engile yokukhanyisa njengoko kuyimfuneko.
IiParameters eziphambili zobuGcisa
1. Khetha nganye nganye ngokwemigaqo kwintsingiselo yeenkcazo zemodeli, kwaye wongeze uphawu lobungqina bokudubula emva kwentsingiselo yenkcazo yemodeli.I-embodiment ethile yile: "imodeli yemveliso - ikhowudi yenkcazo + uphawu lobungqina bokuqhuma + ubuninzi bomyalelo".Umzekelo, ukuba i-IIC floodlight yohlobo lwe-dimming lamp 60W iyafuneka, ubungakanani ziiseti ezingama-20, umyalelo uthi: “Imodeli: FCD63-Specification: F60Z+Ex d IIC T6 Gb+20″.
2. Ngefom yofakelo ekhethiweyo kunye nezixhobo, jonga i-P431~P440 kwiNcwadi yoKhetho lwesibane.
3. Ukuba kukho iimfuno ezikhethekileyo, nceda ucacise ngomyalelo.
Ngaphambili: FC-ZFZD-E6W-CBB-J UkuKhanya koMlilo okuNgxamisekileyo / CBB-6J Uthotho loPhulo-bubungqina bokuKhanya okuNgxamisekileyo
Izibane eziKhokelelwayo eziBonisiweyo
Izibane zobungqina bokudubula kunye nezibane
FCBJ series Explosion-acoustic-optic annu...
Iimpawu zeMpembelelo yeModeli 1. Igobolondo le-aluminium ye-Die-cast i-alloy ene-static yokutshiza, imbonakalo entle.2. I-buzzer yangaphandle, ikhwaza kwaye ikude.3. Ixhotyiswe ngestroboscope, inokudlulisa ukukhanya okulumkisayo kumgama omde.4. Ii-conductor zangaphakathi ziya kubanda-zicinezele ii-terminals ze-OT kunye ne-insulated nge-sleeve, kwaye i-terminals iya kuqiniswa nge-pad ekhethekileyo yokulwa ne-tile ukuze kuqinisekiswe ukuzinza kokusebenza kombane.5. Ⅰ isigqubuthelo esicacileyo senziwe ngamandla amakhulu...
Uthotho lwe-BHZD Ubungqina bokudanyaza kwe-aeronautic buqhambuko...
Iimpawu zeMpembelelo yoMfanekiso 1. I-enclosure ibunjwe yi-alloy ye-aluminium yamandla aphezulu ngexesha elinye.Umphandle wayo utshize ngeplastiki ngoxinzelelo oluphezulu lwe-static emva kokudubula kuqhume ngesantya esiphezulu.Kukho iingenelo ezithile kwindawo ebiyelweyo: ubume obuqinileyo, izinto ezixineneyo eziphezulu, ukomelela okukhulu, imisebenzi emihle yobungqina bokudubula.Inoncamelelo olomeleleyo lweplastiki yomgubo kunye nokusebenza okukhulu kwe-anticorrosive.Umphandle ucocekile kwaye umhle;2. Ukwenziwa kokwenziwa, ubume obubambeneyo, ubuhle...
Uthotho lwe-FCT93 luzibane ze-LED ezingenakuqhambuka (Uhlobo B)
Iimpawu zeMpembelelo yoMzekelo 1. Iqokobhe le-aluminiyam yealloyi yokuphosa ukufa, umphezulu utshizwe nge-electrostatically, kwaye inkangeleko intle;2. I-radiator yoluliwe kwi-tensile aluminium alloy material ene-conductivity ephezulu ye-thermal kunye nefuthe elihle lokutshatyalaliswa kobushushu;3. I-bracket yokuzikhethela okanye umkhono wokudibanisa isibane sesitalato unokukhethwa ukuhlangabezana neemfuno zokukhanyisa kwiindawo ezahlukeneyo, kwaye kulula ukuyilungisa nokuphucula.4. Uyilo lwesibane sesitalato luyilwe ngokweendlela ezimbini ze...
Uluhlu lwe-BSD4 Ugqabhuko-zikhukula olungaqhawukiyo
Iimpawu zeMpembelelo yeModeli 1. I-quadrate enclosure yenziwe nge-alloy aluminium.Ibunjwe ngamandla aphezulu e-aluminium alloy okwexesha elinye, enamandla amakhulu, imisebenzi emihle yobungqina bokudubula.Umphandle wayo utshize ngeplastiki ngoxinzelelo oluphezulu lwe-static emva kokudubula kuqhume ngesantya esiphezulu.2. Izindlu zesibane zenziwe ngeglasi ye-borosilicate ephezulu kunye ne-transmittance enkulu.Izibophelelo zangaphandle zenziwe ngensimbi engenasici.3. Inokuba nofakelo oluthe tye okanye ufakelo olubiyelweyo.Uhlengahlengiso kwi...
FCF98(T, L) series Explosion-proof-proof-proof (cast,...
Iimpawu zeMpembelelo yeModeli 1. Igobolondo yenziwe nge-alloy ye-aluminium ephezulu equkethe ngaphantsi kwe-7.5% ye-magnesium kunye ne-titanium, enokumelana nefuthe elihle kwaye inokumelana nempembelelo engekho ngaphantsi kwe-7J.2. Intsimbi engatyiwayo eveziweyo ifasteners enokumelana ne-corrosion ephezulu.3. Ixhotyiswe ngomthombo wokukhanya we-LED wamazwe ngamazwe, ukukhanya kwendlela enye, ukukhanya okuthambileyo, ubomi obude, ukukhuselwa kokusingqongileyo okuluhlaza, i-lens ye-LED, iteknoloji yokusasazwa kokukhanya kwesibini, ukuhanjiswa kwe-beam okufanelekileyo, iyunifomu ...
I-BAD63-Uluhlu olubonisa ukuqhuma okuphezulu-ukusebenza ...
Iimpawu zeMpembelelo yoMfuziselo 1. Iqokobhe le-aluminiyam ye-alloy die-casting, umphezulu utshizwe nge-electrostatically, kwaye inkangeleko intle.2. Ithatha i-borosilicate tempered glass transparent cover, i-atomization ye-transparent cover kunye ne-anti-glare design, inokumelana nempembelelo yamandla aphezulu, ixhathise ukuxubana kobushushu, kunye nokuhanjiswa kokukhanya ukuya kwi-90%.3. Intsimbi engatyiwa intsimbi eveziweyo ifasteners enokumelana ne-corrosion ephezulu.4. Itekhnoloji yamandla eqhubela phambili, igalelo lombane obanzi, kunye necurr rhoqo...